Ajọ Ifufe Irma gbanwere agba nke Virgin Islands | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ifufe Hurricane Irma abughi naanị ihe mebiri emebi ma were ndụ mmadụ 58, kamakwa ọ bibiri n'ụzọ doro anya Virgin Islands ruo n'ókè nke ọmarịcha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke anyị na-ahụbu, agbaala agba aja aja.
Agba aja aja nke n’egosiputa anyi otu oke ikuku a siri di oke egwu, nke n’acho iguzobe uzo ohuru na onodu Saffir-Simpson.
Oke ikuku nke 295km / h na onodu kacha nta nke 914 mbar, Ajọ ifufe Hurricane Irma ahapụla imerime ụlọ dara ada, imerime osisi dara ada, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ funahụrụ ihe niile.. Dị ka ọ dị na mbụ, enwere ndị nwere oge ka njọ karịa ndị ọzọ, ma ọ bụ n'ihi na ha nwere obere akụ na ụba ma ọ bụ n'ihi na ha bi ebe ajọ ifufe ka ike gafere.
Enwere ike ịhụ mmebi ahụ mgbe ajọ ifufe ahụ hapụrụ mpaghara ahụ, na-aga United States ebe o jiri nwayọ nwayọ, dị ka egosipụtara site na ọnụ ọgụgụ vidiyo ndị ebugo na YouTube na netwọkụ ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na nke ahụ ezughi, Operational Land Imager (OLI) nke satịlaịtị NASA nke Landsat 8 weghaara onyonyo ga-eju ihe karịrị otu anya: n'ime ya, ị na-ahụ aja aja Virgin Islands, mgbe ha kwesịrị ịdị na-acha akwụkwọ ndụ. N'ihi gịnị? E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya.
Otu n’ime ha bụ nke ahụ ahihia enweghi ike iguzogide oke ikuku nke ifufe ma ajọ ifufe ahụ na-emebisị ya., nke na-agaghị abụ ihe ijuanya. Osisi ndị na-ekpo ọkụ, na-ewepu ole na ole, enweghị mgbọrọgwụ siri ike iji sie ike na ala, ebe ọ bụ na cyclones na-etolite kwa afọ, ha enweghị oge iji gbanye mgbọrọgwụ yana, dịka ọmụmaatụ, osisi oak (Ogba egbe) ma ọ bụ fir. Ọzọkwa, nnu mmiri nke oke ifufe nke oke ifufe na-ebugharị na-ere epupụta, na-eme ka ihe ọkụkụ ahụ nwụọ.
Ọ dabara nke ọma, ọ gaghị afụ ụfụ ọzọ. Taa, Ewedawo ifufe nke ebe okpomọkụ. Agbanyeghị, ọ ga-ewe ọtụtụ izu na ọtụtụ afọ iji wughachi ihe niile mebiri emebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Hurricane Irma gbanwere agba nke Virgin Islands
Mgbanwe ihu igwe ga-eme ka ndị ogbenye daa otu narị nde